Afrika Mainty · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Aogositra, 2012
Senegal18 Aogositra 2012
Zambia15 Aogositra 2012
Maoritania: Mpiasa Mpitrandraka Arintany Manohitra Ny ‘Karazana Fanandevozana Vaovao’
Maoritania05 Aogositra 2012
Maherin'ny 2.300 ireo mpiasa nanao hetsi-panoherana tao amin'ny tanànan'ire mpitrandraka ao Zouerat, izay nitondra hatrany amin'ny fiatoan'ireo toeram-pitrandrahan'ny Orinasa National Mining and Industrial Company (SNIM Société nationale industrielle et minière [fr]) efa ho am-polony fanampin'ny fikorontanan'ny asa tany an-toeran-kafa. Ny ivon'ny fitakian-dry zareo dia manodidina ny olan'ny karama.
Afrika Atsimo05 Aogositra 2012
Fankasitrahana no azon'ilay mpilomano Afrikana Tatsimo Cameron van der Burgh izay nandrombaka ny medaly volamena voalohany ho an'i Afrika Atsimo taorian'ny faharesen'ny firenena nahamenatra tamin'ny Lalao Olympika 2008 tany Beijing. Azony ny medaly volamena tamin'ny Alahady rehefa nandresy tamin'ny 100m savarano (brasse) sy nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra eran-tany ho...
Nizeria: Filohan'ny Loholona Mitaky Sivana Amin'ny Haino Aman-jery Sosialy
Nizeria05 Aogositra 2012
Nanome toro-marika vaovao hamehezana ny haino aman-jery sosialy ao amin'ny firenena ny filohan'ny Loholon'i Nizeria David Mark. Mpiserasera maro amin'ny aterineto no nandray io heviny io ho famakiana ady amin'ny tranonkala Nizeriana.
Oganda04 Aogositra 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Aogositra 2012